Famerenana ny fandaharam-potoana: 15 Fitaovana maoderina malaza indrindra
Ireo fitaovana fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny tahiry lehibe. Tsy vitan'ny hoe manampy azy ireo hikaroka tranokala maromaro marobe fa hanome antsika koa ny angon-drakitra marina sy marina. Ny fananana fitaovana havanana amin'ny fitrandrahana anaty tranonkala dia hanampy anao hanatsara ny fizotry ny fikarohana ao amin'ny tranokalanao.
Indro misy lisitra ahitana ireo fitaovana tsara indrindra 30 ho an'ny tranonkala fitrandrahana anaty tranonkala.
AMI Enterprise Intelligence dia rindrambaiko mahery vaika izay mikaroka, mikarakara, manadihady ary manangona angona avy amin'ny tranonkala samihafa.
Efa hatramin'ny ela ny Bixolabs. Izy io dia tranonkala tranokala fetsifetsy azo avaozina izay miorina amin'ny rahona Amazon (EC2) ary manana safidy maro azo alaina avy amin'ny.
Crawlera dia mpilalao fanta-doko sy mpitaingina tranonkala izay tsy vitan'ny hoe manazava ny angon-drakitra mahasoa ho anao, fa mamela ny bots amin'ny tranonkala sarotra ihany koa.
Ny fitrandrahana dia mety manova ny tahirin-tsoratra tsy voarindra ao anatin'ny torolàlana azo antoka sy ara-semantika ao anatin'ny segondra.
Ficstar dia fitaovana mahery vaika amin'ny Internet ary programa fitantanana angona azo ampiasaina ho an'ny orinasa kely sy lehibe.
FMiner dia maso ny fitaovana fandinganana tranokala izay mamela antsika hamoaka lahatsoratra sy sary.
Helium Scraper dia iray amin'ireo programa fitrandrahana harena an-tranonkalan'ny fikojnanana mahery vaika indrindra, natsangana mba handrafetana ny angona avy amin'ny
Import.io dia mora
iWebScraping dia tranon-tsakafo sy serivisy fampiasana angona angon-drakitra.
Ity rindrambaiko momba ny harena ankibon'ny tranonkala ity dia manamboatra spiders sy manala ny tranonkala w tsy mila code. Ilaina ny MacOS X 10.4 na ny dikan-teny hafa mba hahazoana ireo zavatra tokony hatao.
Azo alaina avy amin'ny programa maoderina ny data avy amin'ny rakitra PDF, ary tonga amin'ny dikan-teny maimaim-poana izany.
Ny Cloud Scrapy dia manaparitaka pejy an'arivony amin'ny tranonkala isam-bolana ary manolotra ny drafitra malalaka.
Screen Scraper mamela anao hikorontana ireo data sy endrika natsangana. Izany dia mamonjy ny angon-drakitrao ho an'ny fampidinana avy hatrany.
TheWebMiner dia tolotra maimaim-poana amin'ny tranonkala mahazatra izay manampy anao hamongotra na ny votoatin'ny fampahalalam-baovao sy ny bilaogy manokana Source .